Galoofisyo cusub Mujjo, si dhaxanta aysan kaaga tagin iphone la’aan | Wararka IPhone
Gacan-gashi cusub oo Mujjo ah, si qabowga uusan kaaga tegin adiga oo aan iPhone haysan
Mujjo waxaa loo yaqaanaa kiisaska Iphone-ka maqaarkeeda, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay qalab kale, oo ay ku jiraan galoofisyo ka sameysan dhar kala duwan. Waxay leeyihiin nooc maqaar ah, moodooyin kale oo cudbi ah, sanadkii la soo dhaafayna waxay soo saareen "iibiyaha ugu fiican", galoofyada isboortiga oo leh dahaadh wanaagsan oo ka dhan ah qabowga iyo dabaysha. Sannadkan waxay hagaajiyeen qaabkaas, waxayna ku dareen mid cusub oo leh hal lakab oo dheeri ah oo ah dahaadh qabow daran.
Moodelkii asalka ahaa, oo dib u eegistiisa aan daabacnay sanadkii hore (isku xirka) ayaa lagu hagaajiyay sanadkaan lakab cusub oo daaha ka qaada kaas oo kuu ogolaanaya inaad gacmahaaga kuleyliso meelaha qabow. Waxay sidoo kale hagaajiyeen dhinacyo qaar taas Waxay ka caawiyaan sameynta jawaabta si ay u taabtaan shaashadda xitaa si ka sii fiican, waxayna ilaaliyaan naqshadda aadka u fiican ee iyaga ka dhigaysa mid aad u deggan oo si qumman loogu hagaajiyay gacantaada. Qeybaha silikooniga ee ku jira calaacasha gacantaada ayaa kaa caawinaya in aad haysato iPhone-kaaga adiga oo aan hoos u dhigin. Qiimaheedu waa .49,90 XNUMX bogga internetka ee Mujjo.
Kuwa qabow badan ama ku nool meelaha qabow daran ayaa bilaabay nooc kale oo cusub, la mid ah kii hore laakiin leh lakab kale oo ningax ah. Inta soo hartay ee hagaajinta sida jawaabta taabashada ah ayaa sidoo kale lagu soo daray qaabkan cusub, qiimahiisuna xoogaa wuu ka sarreeyaa qaabka kale, iyadoo lagu heli karo .59,90 XNUMX websaydhka Mujjo.
U isticmaal IPhone-kaaga galoofyo gacmo gashi oo tayo iyo xarrago leh mahad Mujjo
Moodooyinkaan cusub ka sokow, waxay leeyihiin galoofyo kale oo ka samaysan waxyaabo kala duwan, dhammaantood waxay la jaan qaadayaan shaashadaha taabashada ee taleefannada casriga ah. Shaki la'aan, qaabka aan ugu jeclahay waa midka maqaarka, oo tayo gaar ah leh iyo in dhowr sano kadib wali aan liidnayn. Haddii aad rabto galoofyada inay ku isticmaalaan iPhone-kaaga dariiqa inta lagu jiro xilliga qaboobaha iyo galoofyada leh tilmaamo cad ma aha qaabkaaga, fiiri buugga Mujjo maxaa yeelay kuuma niyad jabi doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Gacan-gashi cusub oo Mujjo ah, si qabowga uusan kaaga tegin adiga oo aan iPhone haysan
3D Touch iyo Haptic Touch, maxay ku kala duwan yihiin? [VIDEO]
Ilaalinta Saameynta Hantidhowrka, kiiska ugu firfircoon